Bath Water Buufiyo Milk Pasterization Machine - Shiinaha Qingdao Makiinado Joogto
Mashiinka pasterization biyaha qubeyska laga sameeyey oo tayo sare leh SUS304 steel.The suunka mesh ahama waa xoog sare iyo barti hooseeyo, ma fududa in la deform iyo dayactirka fudud. The heerkulka iyo xawaaraha waa laysku hagaajin karo sida ay shuruud technology-soo-saarka. orodka mishiinka si habsami waa. wax soo saarka pasterization Tani ma aha oo kaliya wanaajiyey tayada shaqo jeermiska, laakiin sidoo kale xalin dhibaatadda of jeermiska aan dhamaystirnayn iyo sineyn oo ay sababtay heerka si toos ah u hooseeya. Shayga ...
The biyaha qubeyska mashiinka pasterization laga sameeyey oo tayo sare leh SUS304 steel.The suunka mesh ahama waa xoog sare iyo barti hooseeyo, ma fududa in la deform iyo dayactirka fudud. The heerkulka iyo xawaaraha waa laysku hagaajin karo sida ay shuruud technology-soo-saarka. Orodka mishiinka si habsami waa.
wax soo saarka pasterization Tani ma aha oo kaliya wanaajiyey tayada shaqo jeermiska, laakiin sidoo kale xalin dhibaatadda of jeermiska aan dhamaystirnayn iyo sineyn oo ay sababtay heerka si toos ah u hooseeya.
line-soo-saarka ah ayaa ansixiyey technology pasterization. Khusayso si khudaarta pickled, low-kulka hilibka, soy waxyaabaha caanaha laga digirta, jelly iyo cunto kale iyo sharaabka jeermiska low-heerkulka.
Haddii ay macaamiishu rabaan in ay si toos ah xirxiraan badeecada, aan in ay xidhi karaan line a qalajiyo hawo nadiif ah.
Previous: Electric ama Steam Heat Hot Air Cuntada qallajinta Machine
Next: Hilibka ka dhigid Qalabka
18l Or 23l Ilkaha Autoclave
Autoclave Wixii Canning
Autoclave Waayo Instrument Qalliinka
Autoclave Horizontal Warshadaha
Sale Industrial Autoclave
Autoclave Machine Ilkaha
Machine Steam Autoclave
Autoclave Iyadoo Manual
Automatic Autoclave Horizontal Warshadaha
Ce Shahaadada Caafimaadka Ilkaha Autoclave Price
Autoclave darka Waayo Sale
Autoclave Steam Cylindrical
Sii Autoclave Steam Portable
Autoclave Steam sii
Ilkaha Autoclave Nooca B
Autoclave Steam Ilkaha
Digital Vertical Nooca Autoclave
pa caanaha sterizer
caanaha mashiinka pasterization
Autoclave Portable Waayo Sale
Autoclave Steam Portable
Autoclave Portable Small
Ahama Steel nadiifinayo Autoclave
Uumi Verde Autoclave
Shaxda Top Autoclave
Vacuum qallajinta Autoclave
Saar Vacuum Waayo Autoclave